Dowlada Soomaliya oo faahfaahisay duqeymo ay fulisay – Banaadir Times
Musalsalka Dhaqtarkii Mucjisada
Musalsalka Maria&Mustafa Qeybtii.1aad
Beesha caalamka oo Shirkii midowga Musharixiinta Ka qeybgaleesa
Kalluumeysato ku dhimatay Roob Dabayla wata oo ka da’ay Xeebaha DG Puntland
RW Rooble oo Wasiirada DG Koofur Galbeed & Odoyaasha ka codsaday la shaqeynta Guddiga Doorashada 20/21.
Dowlada Soomaliya oo faahfaahisay duqeymo ay fulisay
By banaadir 8th March 2020 16
Dowladda Federaalka Soomaaliya ayaa faah faahin ka bixisay duqeyn Ciidanka dowladda iyo Taliska Mareykanka ee qaaradda Afrika ee AFRICOM ay ka fuliyeen meel u dhaw tuulada Gandarshe ee Gobolka Shabeellaha Hoose.
Dowladda Federaalka Soomaaliya iyo Ciidanka AFRICOM ee Mareykanka oo iskaashanaya ayaa duqeynka cirka u gaystay Alshabaab ku sugnaa meel u dhaw Tuulada Gandarshe ee gobolka Shabeelada Hoose .
Duqeyntan oo aheyd mid qorsheysan ayaa lagu dilay afar(4) ka tirsan dagaalamayaasha Alshabaab.
DFS iyo Ciidamada AFRICOM ayaa qaadaya tallaabooyin muhiim ah oo looga gol-leeyahay ilaalinta nolosha dadka shacabka inta lagu guda jiro la dagaalanka Al-shabaab, iyada oo si hufan loo baarayo eedayn walba oo lasoo wariyo. Ilaa hadda hubintii la sameeyey ma jirto cid shacab ah oo wax ku noqotay dhaawac iyo dhimasho midna.
Weerarkan ayaa imanaya kagadaal markii ciidanka Xoogga Dalka oo fadhigoodu yahay Ceel Salini ay iska difaaceen weerar Alshabaab ee kusoo qaadeen xeradooda militari.
Ma jirin cid ka tirsan Ciidanka Xoogga Dalka oo wax ku noqatay weerarkii Al-shabaab ay ku qaadeen Saldhiga Ceel Salini.
Madaxweynihii hore ee Soomaliya oo si kulul ooga hadlay dagaalada ka socda gobolka Gedo.
Maamulka G/Banaadir oo la wareegaya qaadista imtixaanka fasalka 8-aad
DAAWO: Guddoomiye ku xigeen ka bad baaday Qarax gaarigiisa loogu xiray
By banaadir 1st September 2018
Baarlamaanka Jubbaland oo ku baaqay in si sharuud la’aan ah loo joojiyo dagaalka ka socda…
Garoonka Diyaaraddaha Muqdisho oo saakay Lagu xiray Guddoomiyaha Rugta Ganacsiga Jubbaland
By banaadir 31st July 2018
Guddoomiyaha Somali Minifoodball ee Europe oo socdaal shaqo ku tagay Belfast Dalka Ariland